Namoaka fepetra tokony arahin'ireo sekoly tsy miankina ny ministera - Book News Madagascar
Publié octobre 20, 2017 par Book News
Navoitra nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety io maraina io ny arofenitra sy fepetra tsy maintsy arahina ho an’ireo sekoly efa miverina mianatra, araka ny navoakan’ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena. Ireo sekoly tsy miankina efa niverina nianatra no iharan’ireo fepetra ireo. Ireto avy izany fepetra izany.
1- Ny sekoly rehetra dia manangana “comité de vigilance” izay natao hanara-maso ny mpianatra eo ampidirana ny faritry ny sekoly sy mandritra ny fotoam-pianarana ary handray an-tanana ireo izay ahitana trangan’aretina pesta. Ireto avy ny mpikambana ao: ny Tale, ny mpampianatra ary ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny sekoly.
2- Manangana toerana voatokana ho an’ireo olona izay ahiahiana ny sekoly tsirairay. Toerana izay ahitana fitaovana tsotra ho fandraisana an-tanana ny marary (Rano, Gant, Masque, thermomètre,…).
3- Arahina ireo fepetra fitandrovana ny fahadiovana ao amin’ny faritry ny sekoly sy ny manodidina.
Alohan’ny hidirana ny faritry ny sekoly:
1- Ny “comite de vigilance” no manara-maso ny mpianatra rehetra miditra ny faritry ny sekoly.
2- Raha toa ka misy mpianatra, olona ahiahiana ho tsy salama dia hatokana ao amin’ilay toerana. Ary raha misy soritr’aretina pesta(hafanana be, kohoka sy rehoka misy rà, aretin’andoha, fahararian’ny tratra, fahasemporana, atody tarina) dia antsoina ny 910.
3- Ireo mpianatra sy ireo tompon’andraikitra efa tratran’ny trangan’aretina pesta sy efa nifanerasera tamin’ny olona voan’ny pesta dia mila mitondra « certificat médical » vao afaka miditra ny faritry ny sekoly.
Raha ao am-pianarana no ahitana tranga ahiahiana
1- Manatona avy hatrany ny « comité de vigilance » ny mpampianatra raha mahatsapa tsy fahasalamana.
2- Ny mpampianatra no manara-maso ny mpianany ary mampandre ny « Comité de Vigilance » raha toa ka misy tranga mampiahiahy.
3- Atokana ilay mpianatrana, na olona ahiahiana ao anatin’ilay toerana natsangana handraisana an-tanana ny marary
4- Miantso avy hatrany ny laharana maintso 910, miandry ny toromarika ary mangataka ekipa “d’intervention mobile” na manaraka izay toromarika azo ao
5- Miantso Mpitsabo eny amin’ny CSB ny tompon’andraikitra ho tonga ao an-tsekoly ary mandray an-tanana ilay marary.
6-Hampandrenesina avy hatrany koa ny Ray aman-dRenin’ilay mpianatra tsy salama.
7- Mandritra izany dia tsy mahazo mivoaka ny faritry ny sekoly ny mpianatra sy ireo tompon’andraikitra izay nifanerasera tamin’ilay marary fa miandry ny fitiliana atao amin’ilay olona ahiahiana.
8- Raha toa ka tsy misy pesta ny valin’ny fitiliana dia mahazo mody ny rehetra.
9- Raha toa kosa ka voamarina fa misy pesta ilay olona ahiahiana dia:
– Tsy mahazo mivoaka ny faritry ny sekoly fa miandry ny toro-marika sy fizarana fanafody avy amin’ny Mpitsabo.
– Manao lisitra ny anaran’ireo voakasika rehetra ny talen-tsekoly.
– Mampahafantatra avy hatrany ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny MEN (miantsony Chef ZAP, ny Chef CISCO, ny DREN ary ny COACH) ary miantso avy hatrany ny laharana maintso 020 30 807 86 ary manao tatitra amin’ity mailaka ity celluleripostepeste@gmail.com
10- Ireo mpianatra sy tompon’andraikitra nahatontosa hatramin’ny farany ny fitsaboana ka manana « certificate médical » ihany no afaka miverina mianatra na miasa.
11-Ny sekoly izay misy lakilasy nahitana trangan’aretina pesta dia akatona avy hatrany mandritry ny herinandro, ka ny DREN sy ny CISCO miaraka amin’ny COACH no mandray fanapahan-kevitra amin’ny fampiantoana ny fampianarana arakaraka ny zava-misy ao aminy.
12- Hamafisina ny fanentanana sy ny fitandrovana ny fahadiovana.
13- Tohizana hatrany ny fanadiovana sy fanondrahana fanafody ny sekoly sy ny manodidina azy.
Marihina fa ny « CERTIFICAT MEDICAL » avy amin’ny” CENTRE DE FORMATION SANITAIRE PUBLIC “ ihany no manankery.